Iflethi epholileyo enombono weterrace ye-ELBE - izibuko
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGayeon
Hlala kwiflethi yethu epholileyo 4min kude neHamburger "Intengiso yeentlanzi" kunye neSikhululo sikaloliwe i-S kwaye ubone iinqanawa ezinkulu ezifika kwizibuko laseHamburg. Ukuba ufuna ukubona iHamburg yokwenyani, le ndawo ikulungele!
Indawo yethu ifanelekile ku-1-2 umntu (abantu). Inayo yonke into oyifunayo ukuze uzive usekhaya. Side sibe nebalcony encinci entle enombono we-ELBE. Siyakuthanda ukuhlala kule balcony ngexesha lokutshona kwelanga njengoko unokubamba imitha yelanga yokugqibela ukusuka apho.
Zonke iindawo. Umatshini wokuhlamba ukwigumbi lokuhlambela
Indawo yethu imi kwindawo esembindini kakhulu. Kummandla we-hip Altona kwaye ungekho kude kakhulu kwiindawo ezidumileyo njengeReeperbahn, iSternschanze, neSt.Pauli. Ngololiwe we-S usembindini wesixeko phakathi kwemizuzu embalwa (izikhululo ezi-3).
Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlola isixeko okanye ukufikelela ngokulula kwishishini lakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Gayeon
Nanini na ngomyalezo
Inombolo yomthetho: 22-0027226-20